၁၉၉၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့မှာ www. ကိုပြည်သူထံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် – DigitalTimes.com.mm
၁၉၉၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့မှာ www. ကိုပြည်သူထံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်
U Min Thant Apr 30, 2016
CERN ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ၊ www လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ World Wide Web ကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သူ Tim Berners-Lee ဟာ source code ဖြစ်တဲ့ world wide web (www) ကို ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့မှာ ပြည်သူ့ထံကို Free ရရှိနိုင်တဲ့ Public Domain အနေနဲ့ လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် မိတ်ဆက်ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ World Wide Web Software နဲ့ Protocol ကို အားလုံးကို အလကားရရှိအောင် ချပြပေးခဲ့တာဟာ Internet သမိုင်းကြောင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံး အခိုက်အတန့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သမိုင်းကြောင်းဆရာတွေကတော့ ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တာဟာ Website တွေကို စတင်မွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Facebook Page ကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးဆီ တစ်ခါတည်းဘယ်လို Invite လုပ်မလဲ
မြန်မာငွေတစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းမိုက် Panasonic Eluga ဖုန်းအသစ် ထွက်ရှိ